Tetiandro tibetàna - Wikipedia
Ny tetiandro tibetàna dia tetiandro manara-bolana sy masoandro izay ampiasaina amin' ny raharaham-panjakana ao Tibeta hatramin' ny taona 1027 nefa efa nisy talohan' izay.
Manomboka amin' ny andro ahatsinanan' ny volana manaraka ny fidiran' ny masoandro ao amin' ny antokon-kintan' ny Ondrilahy (Alahamady) ny taona amin' io tetiandro io. Arakaraka ny taona dia mitranga eo anelanelan' ny fiantombohan' ny volana Febroary sy ny fanombohan' ny volana Marsa izany. Ankalazaina amin' io daty io ny taom-baovao tibetàna izay atao hoe Losar. Tamin' ny taona 2008 dia nankalazaina tamin' ny 7 Febroary ny taom-baovao tibetàna. Misy volana roa ambin' ny folo (na indraindray telo ambin' ny folo) ny taona iray ao amin' ny tetiandro tibetàna.
Manana anarana ny taona tibetàna ka anaram-biby ireo anarana ireo sady ampifandraisana amin' ny singa dimin' ny filôzôfia sinoa. Ny volana anefa tsy manana anarana manokana fa tondroina amin' ny laharany ao amin' ny taona.
Izao ny fifanarakarahan' ny anaran-taona ao amin' ny tetiandro tibetàna: Bitro, Dragona, Bibilava, Soavaly, Ondry, Rajako, Akoholahy, Kisoa, Voalavo, Omby ary Tigra. Ireto koa ireo singa dimy: Afo, Tany, Metaly, Rano, Hazo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetiandro_tibetàna&oldid=1000322"
Dernière modification le 14 Janoary 2021, à 07:34
Voaova farany tamin'ny 14 Janoary 2021 amin'ny 07:34 ity pejy ity.